Barcelona oo xiiseyneysa xiddig ka tirsan Inter Milan, mana ahan Lautaro Martínez – Gool FM
(Barcelona) 10 Sebt 2020. Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda Barcelona ay bilaawday inay xiiso ka muujiyo adeega xiddig ka tirsan Inter Milan.
Wargeyska ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Barcelona ay qorsheyneyso in Inter Milan ay isdhaafsadaan labada xiddig ee Stefan de Vrij iyo Arturo Vidal, inta lagu gudi jiro suuqan kala iibsiga ee xagaaga.
Arturo Vidal ayaa qandaraas u saxiixi doona kooxda Inter labada maalmood ee soo socota, kaddib markii lagu wargaliyay inaan looga baahneyn Barcelona, xilli heshiiskiiska uu ku joogo garoonka Camp Nou uu ka harsan yahay hal sano oo kaliya.
Wargeyska “Mundo Deportivo” wuxuu tilmaamay in saxaafada talyaaniga ay hadalheyso suurtagalnimada uu Stefan de Vrij ugu biiri karo kooxda Barcelona, isagoo qeyb ka noqonaya heshiiska Arturo Vidal.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in qaab ciyaareedka daafaca kooxda Inter Milan ee Stefan de Vrij uu si weyn ugu qanacsan yahay tababaraha cusub Barcelona ee Ronald Koeman.
Si kastaba ha noqotee, Wargeyska ayaa sheegay in Barcelona ay u soo bandhigtay Inter in Stefan de Vrij uu qeyb ka noqdo heshiiska uu Arturo Vidal ugu wareegayo Nerazzurri, lagu daray lacago, laakiin kooxda reer Talyaani ayaa diiday dalabkan.
Balse wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in maamulka kooxda Barcelona aysan ka niyadjabi doonin raacdada ay ugu jiraan sida ay ku heli lahaayeen adeega Stefan de Vrij, waxayna isku diyaarinayaan inay soo bandhigaan dalab kale ee cusub, ka hor inta uusan Vidal si rasmi ah ugu dhaqaaqin Nerazzurri muddada soo socota.
RASMI: Bayern Munich oo xaqiijisay in Ivan Perisic uu kooxda ka tagay kuna biirayo...